လမ်းဘေးက ကော်ရှုကလေးငယ်တွေကို ခေါ်ယူမွေးစား လိမ္မာစေခဲ့တဲ့ ခိုလှုံရာရိပ်သာက ဆရာမလေး – Shwe Pyi Aye
လမ်းဘေးက ကော်ရှုကလေးငယ်တွေကို ခေါ်ယူမွေးစား လိမ္မာစေခဲ့တဲ့ ခိုလှုံရာရိပ်သာက ဆရာမလေး
လမျးဘေးက ကောျရှုကလေးငယျတှကေို ခေါျယူမှေးစား လိမ်မာစခေဲ့တဲ့ ခိုလှုံရာရိပျသာက ဆရာမလေး လမျးဘေးက ကောျရှုကလေးငယျတှကေို ခေါျယူမှေးစား လိမ်မာစခေဲ့တဲ့ ခိုလှုံရာရိပျသာက ဆရာမလေးကွယျငါးလေးတဈကောငျဖမျးမိတယျ…ဘာဖွဈဖွဈ မလှှတျပါဘူးကှယျ… ပုံ့ကို ဟိုး…အရငျထဲက သိတဲ့သူဆို ဒီကလေးလေးကို မှတျမိကွပါလိမ့ျမယျ…မသိသေးတဲ့ လူတှအေတှကျရယျ၊ ပရဟိတလုပျခငြျလို့ ဘယျလိုစလုပျမလဲလို့ မေးတဲ့လူတှအေတှကျရယျ ပုံ့ သူတို့နဲ့ စတှေ့ဖွဈကွပုံလေးကို အကဉြျးလေး ပွောပွမယျလှနျခဲ့တဲ့ ၅ နှဈ ၂၀၁၆ လောကျမှာ ကောျရှုလလှေင့ျနကွေတဲ့ ဒီကလေးတသိုကျနဲ့ ပုံ့ စတှေ့ခဲ့ပါတယျ…တှေ့ခဲ့တဲ့ နရောက ဘယျမွို့မှာမဆို ဒီလို ကလေးတှကေကြျစားနကေနြရောဖွဈတဲ့….
ဘူတာ…. ပုံ့က အဲ့ခြိနျတုံးက ဆရာမလုပျနတေဲ့အခြိနျ…ညနေ ကြောငျးကပွနျတော့ ဗိုကျဆာတာနဲ့ ဘူတာမှာ အကငျဝယျစားဖွဈတယျ…ပုံ့အကငြ့ျက အစားဆို ရတာနဲ့ တနျးစားခငြျတာ…ဒါနဲ့ ကွကျကငျဆိုငျဘေးက ခုံလေးမှာဘဲ မကကြျသေးတဲ့ အကငျတှစေောင့ျရငျး ကကြျတဲ့အကငျတှေ ထိုငျစားနလေိုကျတယျ…ခဏနတေော့ ထုံးစံအတိုငျး အသကျ ၄ နှဈအရှယျတဈယောကျ၊ ၆ နှဈအရှယျလောကျတဈယာကျ လကျထဲ ကောျဗူးလေးတှကေိုငျပွီး ရောကျလာပါပွီ“…မကွီး သားကို မုန့ျဖိုးပေး…ပုံ့အကငြ့ျကလဲ တမြိုး…ဟငျးစားမပေးခငြျဘူး…ကှနျခကြျပဲပွခငြျတာ…တောငျးတယျ၊ ပေးလိုကျတယျ၊ သုံးတယျ၊ ကုနျသှားတယျ…အဲ့လို သံသရာလညျနတောကို မကွိုကျဘူး… သူတို့ တောငျးရငျစားရမှနျးသိနရေငျ လှယျလှယျဘဲတောငျးနတေော့မယျ…တောငျးရတာ ရှကျစရာကောငျးမှနျးလဲ မသိတော့ဘူး….ဒါနဲ့ ပုံ့ ပထမ တခှနျး၊ နှဈခှနျး မသိခငြျယောငျဆောငျပွီး ဆကျစားနလေိုကျတယျ…အံမယျ ကိုယျတောျက အနားလာထိုငျပွီး လကျလေးကုတျပွီး အီးညှောင့ျ၊ အီးညှောင့ျ တောငျးတာဗြ…ဒါနဲ့ ပုံ့လဲ မုန့ျဖိုးမပေးနိုငျဘူး…မုန့ျစားမလား ဝယျကြှေးမယျပေါ့… ဘာပွနျပွောတယျထငျလဲ…မုန့ျဖိုးဘဲလိုခငြျတာတဲ့…နောကျနေ့စားဖို့တဲ့…ခုက ဗိုကျဝပွီတဲ့ ခုန ထမငျးစားထားတယျတဲ့…ပုံ့ကလဲ ဘယျရမလဲ သူတို့လောကျကတော့ ပငြျးတောငျပငြျးသေးတယျ…မုန့ျဖိုးတော့ မပေးဘူး…ပိုကျဆံရရငျ နငျတို့က ကောျရှုတာပေါ့…ဒါနဲ့ သူတို့ကလဲ ဗိုကျဝရငျ မရှုပါဘူးတဲ့…
ပုံ့လဲ ပွနျငွငျးတာ ဟငျ နငျတို့ ခုနပွောတော့…ဗိုကျဝနပွေီဆိုလို့…ဒီလိုနဲ့ အပွနျအလှနျ မေးကွပွောကွတယျပေါ့…ပုံ့လကျထဲက အကငျလေးတှလေဲကြှေး စကားတှလေဲပွောနဲ့ ရငျးနှီးလာတယျ…မေးကွည့ျတော့ အကွီးလေးက မိဘတှေ မရှိတော့ဘူး…အငယျလေးကတော့ ဖှားအရှေိသေးတယျ… ဒီလိုနဲ့ ကောျရှုတဲ့အကွောငျးတှပွေော…ဆိုငျခနျးတှေ ဖောကျတဲ့အကွောငျးတှပွေောနဲ့…ပွောရငျး ပုံ့လဲ တောငျးစားရတာ ရှကျစရာဆိုတဲ့အသိလေး သူတို့ စိတျထဲ တဖွညျးဖွညျးသှငျးပေးတယျ… နောကျ သူတို့ကို ပုံ့ခေါျမယျ ဘယျလိုကြောငျးထားမယျ…ဘယျလိုနရေမယျ ဆှဲဆောငျတယျပေါ့…ဒီလိုနဲ့
ပွောရငျး ပွောရငျး အကွီးလေးက ပုံ့ခေါျတဲ့နောကျ လိုကျမယျတဲ့…အငယျလေးကလဲ လိုကျခငြျတယျ…သူ့အဖှားပွောပေးပါပေါ့…ဒါနဲ့ ပုံ့လဲ ပိုငျပဟ ဆိုပွီး သူတို့နတေဲ့ နရောမေး နောကျနေ့ဆကျဆကျလာခေါျမယျလို့ ပွောပွီး ပွနျခဲ့တယျ….နောကျနေ့ရောကျတော့ ဆိုငျကယျတဈစီးဆှဲပွီး ပုံ့တယောကျထဲ အကွောကျအလန့ျမရှိ…သူတို့လိုလူတှေ နတေဲ့ စုရပျဖွဈတဲ့ ကြောကျတောျကွီး ဘုရားဝငျးထဲသှားခဲ့တယျ…ကလေးတှတေငျမှတျတာ…ဟိုရောကျတော့ ရှာတောငျ တညျလို့ရတယျ…ခကြျပွုတျနတေဲ့လူတှေ ဖုနျထဲ အိပျနတေဲ့လူတှရေော…အို..စုံလို့…အရှယျစုံဘဲ ၃၀ လောကျရှိတယျ…. ပုံ့လဲ တယောကျထဲ ဝငျသှားပွီး အောငျနိုငျဦးရောလို့ သူ့ကို မှေးစားမလို့ လိုကျမယျဆိုလို့ လာခေါျတာလို့…အဲ့လိုပွောတော့ အကုနျရုတျရုတျသဲသဲဖွဈသှားကွတယျ…မဖွဈခံနိုငျရောလား…ဒီလူကွီးတှကေ ဒီကလေးလေးတှကေို တောငျးစားခိုငျးနကွေတဲ့ နောကျကှယျကလကျမဲတှလေေ…သူတို့ စားခှကျ သှားလုသလိုဖွဈတာပေါ့… အဲ့မှာ သူတို့ကလဲ ဘယျကို ခေါျမှာ ဘာလို့ ဘာညာပေါ့…ပုံ့လဲ ရှငျးပွပေးတယျ…အဲ့ခြိနျ အောငျနိုငျဦးလေးက ထုံးစံအတိုငျး လကျထဲ ကောျဗူးတလုံးနဲ့ ဆရာမ ဆိုပွီး ပွေးထှကျလာတယျ…သူလိုကျမယျဆိုပွီး
လူကွီးတှပွေောပွီး ပုံ့အနားကပျနတေယျဒါနဲ့ ပုံ့လဲ နောကျလိုကျမယ့ျ အသေးလေးရောလို့မေးတော့ သူ့အဖှားဆိုသူက ထှကျလာပွီး မထည့ျနိုငျဘူး ဘာညာနဲ့…ခိုငျးစားခငြျတာလေ…ပုံ့လဲ ကလေးကို ခိုငျးစားရမလားဆိုပွီး စိတျတိုတာနဲ့ လူ ၃၀ နဲ့ တဈယောကျ မကွောကျမလန့ျ ရနျဖွဈပလိုကျတယျ…အကုနျတိုငျမယျပေါ့…ဒီကလေးက လိုကျခငြျရဲ့သားနဲ့ မထည့ျရငျ… တောငျးစားနတော ရှကျဖို့ကောငျးကွောငျး ခငျဗြားတို့ အကောငျးတှနေဲ့ မရှကျလို့ တသကျလုံးတောငျးစားနပေမေဲ့…ကလေးတှကေ မလုပျခငြျတော့တာကို အတငျးဆှဲမထားနဲ့ မထည့ျရငျ တိုငျမယျတောမယျ ဘာညာဖွဲခွောကျ
ပွီး ခေါျလာလိုကျတယျဆိုငျကယျဆီ လမျးလြှောကျသှားကွရငျး ကလေးလေးနှဈယောကျရဲ့ ပုခုံးလေးတှကေိုဖကျပွီး သားတို့ အခု တောငျးစားတဲ့သူလဲ မဟုတျတော့ဘူး…လလှေင့ျကလေးလေးတှလေဲ မဟုတျတော့ဘူး…ဒါကွောင့ျ သားတို့ ဆရာမနဲ့လိုကျမယျဆို လကျထဲက ကောျဗူးလေးတှေ ပဈလိုကျတော့ဆိုတော့ သူတို့နှဈယောကျလုံး လကျထဲက ကောျဗူးလေးတှကျေု ပွိုငျတူလှှင့ျပဈပွီး ပုံ့ ဆိုငျကယျကျု ရှေ့တယောကျ၊ နှဈတယောကျစီးပွီး ဘဝအသဈတဈခုဆီ အပွီးလိုကျခဲ့ကွတော့တယျ…ဒါနဲ့ သူတို့ကို ပုံ့အိမျခေါျ ရမေိုးခြိုးပေး၊ သနပျခါးလူး၊ အငျ်ကြီအသဈလေးတှေ ဝတျပေးပွီး… အငျ်ကြီတှေ အရုပျတှေ အကုနျဝယျ၊ အထုတျလေးနဲ့ထုတျပေးပွီး ညနရေောကျတော့ ဒီလိုကလေးလေးတှကေို စောင့ျရှောကျပညာသငျပေးတဲ့ ကှမျးခွံကုနျးမွို့က ဝိဇယမငျ်ဂလာကြောငျးတိုကျဆီ ခရီးထှကျခဲ့တော့တယျ….ဟိုရောကျ ဆရာတောျဆီ အပျနှံ…လိုတာတှေ ဝယျပေး ပွနျလာတယျပေါ့…တပါတျလောကျနတေော့ ကလေးလေးတှေ အဆငျပွမေပွေ သှားကွည့ျတယျ… အဆငျပွပွေီး ကြောငျးလဲ တကျကွမယျဆိုတော့ ဝမျးသာရတယျ…ဒါနဲ့ ဓာတျပုံလေးတှေ ရိုကျလာပွီး ကနြျခဲ့တဲ့ ကလေးတှကေို ဆှဲဆောငျဖို့ ခွလှေမျးစပါတော့တယျ…နောကျနေ့ရောကျတော့ အဲ့ဓာတျပုံလေးတှယေူပွီး ဘူတာကို သှားပါတော့တယျ…ဘူတာရောကျတော့
အဆငျပွနေတေဲ့ ကလေးနှဈယောကျပုံပွပွီး…ကနြျတဲ့ကလေးတှကေို အောငျနိုငျဦးတို့ အရမျးအဆငျပွနေတေဲ့အကွောငျး၊ ပြောျစရာကောငျးတယျဆိုတဲ့အကွောငျး၊ ကြောငျးတှတေကျတော့မယျ ဆိုတဲ့အကွောငျး အားကအြောငျပွော ပွီး သားတို့ပါ လိုကျခငြျရငျ ခေါျမယျဆိုပွီး မွူဆျတော့…ကလေးတှေ စိတျပါပွီး လိုကျမယျဖွဈရောဒါနဲ့ ညတှငျးခငြျး ကလေးတှစေိတျမပွောငျးခငျ ကလေးတှကေို ခေါျ…မိဘတှပွေောရမယျဆိုတဲ့ကလေးတှကေို သူတို့ မိဘတှနေတေဲ့ ကမျးနားထဲတှေ၊ ကိုငျးတောထဲတှထေိလိုကျ ပွောပွီး…ကလေးတှကေို ဓမ်မဗိမာနျကြောငျးကို စုခေါျ… ဆရာတောျကို ခှင့ျတောငျးပွီး ကလေးတှကေို ရမေိုးခြိုး ကိုယျတိုငျ သနပျခါးတှလေူးပေးပွီး ကားငှားကှမျးခွံကုနျးကိုက ဝိဇယမငျ်ဂလာကြောငျးကို ထပျပို့ပါတော့တယျ…စုစုပေါငျး ၁၀ ယောကျပေါ့… ဟိုရောကျတော့ လိုတာတှေ ဝယျခွမျး၊ ဆရာတောျဆီ အပျနှံပွီး ပွနျခဲ့ပါတော့တယျ…လူလဲ စုမိရော စပွီး မှှပေါပွီ…တပါတျလောကျနတေော့ ဘုနျးဘုနျးက ကလေးအခြို့ ထှကျပွေးတဲ့အကွောငျး၊ လိုကျဖမျးတဲ့လူကို ခဲနဲ့ထုပွီး ပွေးတဲ့အကွောငျး ဖုနျးဆကျပါတော့တယျ…ဘုနျးဘုနျးလဲ လိုကျဖမျး ခြော့မော့ထားပွီး ပုံ့ကို လာဖို့ခေါျပါတော့တယျ…ပုံ့လဲ လိုကျသှားပွီး ဟိုရာကျတော့ ကလေးတှကေို အဲ့လို မလုပျဖို့ပွောပွီး…ဘုနျးဘုနျးနဲ့တိုငျပငျကာ လူခှဲထားဖို့ တိုငျပငျရပါတယျ…ဒါနဲ့ ၄ ယောကျကို YGW ပို့…ကနြျတဲ့ကလေးတှကေို ဘုနျးဘုနျးကဘဲ တာဝနျယူပွီး ဆကျလကျစောင့ျရှောကျပေးပါတယျ…ဘယျလောကျပဲ ကောငျးတဲ့နရောကိုပို့ပို့ မရတဲ့လူကတော့ မရပါဘူး…ကနြျခဲ့တဲ့ ကလေး ၅ ယောကျထဲက ၃ ယောကျထှကျပွေးပွီး၊ ၂ယောကျကနြျခဲ့ပါတယျ…
အဲ့ ၂ယောကျကတော့ ကိုရငျဝတျပွီး ဘုနျးဘုနျးမပြံလှနျခငျထိ ကြောငျးတှတေကျပွီး လိမျလိမျမာမာနသှေားကွပါတယျ…ဘုနျးဘုနျးပြံလှနျပွီးနောကျမှာတော့ ဘုနျဘုနျးစောင့ျရှောကျထားတဲ့ စှန့ျပဈခံအဖှားလဲ ပုံ့ဆီရောကျလာခဲ့တယျ…နောကျလ နညျးနညျးနတေော့ အရငျဆုံး ပုံ့နဲ့လိုကျခဲ့တဲ့ ကိုရငျအောငျနိုငျဦးလေးလဲ လူဝတျလဲပွီး လပှတ်တာဘကျကို အလုပျထှကျလုပျလရေဲ့…မကွာခငျ လအနညျးငယျကဘဲ ခိုးလို့ လကျမခံနိုငျပါဘူး…သူခိုးမို့ဆိုပွီးကိုရငျ ဖိုးခစြျလေးကိုလဲ လူဝတျလဲပွီး ပုံ့ဆီပွနျပို့လိုကျပါတယျ….ကလေးလေးတှကေို ခြော့တခါ ခွောကျတလှည့ျနဲ့ ပွုစုခဲ့တဲ့ ပြံလှနျသှားတဲ့ဘုနျးဘုနျးကိုဘဲ သတိရပါတယျ…အခုတော့ ဘုနျးဘုနျးမရှိတဲ့နောကျ အောငျနိုငျဦးလေးလဲ ကိုရငျမဟုတျ စာမသငျရတော့ပမေဲ့ အရငျလို လလှေင့ျကလေး မဟုတျတော့ဘဲ အလုပျလုပျနတေယျ ကွားရတော့ ဝမျးသာမိတယျ…ပုံ့ဆီ လာပို့ တဲ့ ကိုရငျ ဖိုးခစြျလူထှကျလေးကလဲ ရိပျသာမှာ နိုငျသလောကျကူရှာတယျ…ခိုးတယျဆိုတာလဲ သူတို့ပွောလို့သာ ကွားရတယျ…ဒီမှာတော့ တခါမှ ခိုးတာ မရှိပါဘူး…ညီလေး ညီမလေးတှနေဲ့ဆော့တယျ…ဝိုငျးထိနျးတယျ…အဘိုးအဖှားတှအေတှကျ ထမငျးဝိုငျးခူးပေးတယျ…ရိပျသာက ဝနျထမျးအကိုနဲ့ ကူပွီး ရိပျသာအလုပျတှေ ကူလုပျတယျ…ဆော့တယျ စားတယျ ကူတယျ…သား ဘူတာနဲ့ နီးနီးလေးလေ သားပွနျခငြျလားဆိုတော့…ဟင့ျအငျး မပွနျဘူး…သား ဒီမှာဘဲ ပြောျတယျတဲ့…အရမျးကြနေပျပါတယျ…ဆယျသလောကျ တငျမကနြျခဲ့ပမေယ့ျ…ကနြျသလောကျ ကလေးလေးတှရေဲ့ စိတျထဲက ပေါ့ပကြျပကြျစိတျလေးတှနေရောမှာ တနျဖိုးရှိတဲ့ စိတျလေးတှေ ထည့ျပေးနိုငျခဲ့တယျ…ကောျရှုလလှေင့ျကလေးတှဘေဝကနေ ကိုယ့ျအားကိုယျကိုးတဲ့လူငယျလေးတှေ၊
ပရဟိတစိတျရှိတဲ့လူငယျလေးတှအေဖွဈ ပွောငျးပေးနိုငျခဲ့တယျ…အဲ့တုံးက ပုံ့ သူတို့ကို ဆုံးမခဲ့တဲ့ စကားလေး ရှိတယျ…ကွမျးပမေယ့ျ စတေနာစကားမို့ ပွနျပွောပွခငြျပါမယျ….သားတို့…ဟိုးမှာ ခှေးလေးတှေ့လား…အဲ့ခှေးလေး ဗိုကျဆာရငျ ဘာလုပျလဲသိလား….”အစာလိုကျတောငျးတယျ ဆရာမ…”စားပွီး ဗိုကျဝရငျရော သူဘာလုပျလဲ…သား…အိပျတယျ၊ ဆော့တယျ၊ ဟောငျတယျ…”အိပျရငျရော သူဘယျမှာအိပျလဲလမျးဘေးမှာ အိပျတယျ…ဒါဆို သားတို့ကရော…”ဆိုတော့ နာရမှနျးမသိ ရီနရှောတယျ…သားတို့ ဆာရငျဘာလုပျလဲ…အိပျရငျရော ဘယျမှာအိပျလဲ…”“…ဟီးဟီး ဆာရငျတောငျးတယျ…ဗိုကျပွည့ျရငျ လမျးဘေးမှာဘဲ အိပျတယျ၊ ဆော့တယျ..”“….ဒါဆို သားတို့က ခှေးနဲ့ ဘာထူးလဲ တူတူဘဲလေ ပုံစံဘဲကှာတာ…”သားတို့က လူဖွဈခငြျတာလား…ခှေးဖွဈခငြျတာလား…” ဆိုတော့….တညီတညှှတျထဲ “…လူဖွဈခငြျတာ…” တဲ့… လူဖှဈခငွရြငြ လူတှလေိုနရမေယြ ကိုယစြားဖို့အတှကြ ကိုယရြှာရမယြ…အိမနြဲ့နရမေယြ…အိပရြာနဲ့ အိပရြမယလြို့…အဲ့အတှကြ ကိုယ့အြားကိုယကြိုး ပြိုကဆြံရှာရမယြ…” လို့….ဒီလိုနဲ့ ကြှနျမသူတို့ကို သိမျးသှငျးနိုငျခဲ့ပါတယျ…လူမှနျရငျ လူပီသအောငျနရေမယျ ဆိုတဲ့ အသိလေးကို ပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ…..ပရဟိတဆိုတာ ဘယျကနစေလုပျရမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးလေးကိုလဲ ပုံ့ဖွပေါ့မယျ…ပရဟိတကို ရငျထဲကလာတဲ့ ခံစားခကြျအတိုငျးဘဲ စတငျလုပျပါ…ပုံ့လဲ ပရဟိတလုပျမယျဟဲ့ဆို တမငျစတငျခဲ့တာမဟုတျပါဘူး…ပုံ့ရဲ့ စတေနာအတိုငျး လုပျရငျးကနေ ပရဟိတဖွဈသှားတာပါ…နောကျပွီး ပုံ့ပွောခငြျတာက လလှေင့ျလူငယျတှဆေိုတာ တိုငျးပွညျရဲ့ အနာဂါတျကို မြားစှာ အကြိုးသကျရောကျစသေူတှပေါ…လလှေင့ျ လူငယျကို အခြိနျမှီမထိနျးသိမျး မစောင့ျရှောကျခဲ့လို လလှေင့ျလူကွီးဖွဈသှားရငျ တိုငျးပွညျအတှကျ အန်တာရယျမြားပါတယျ…ရာဇဝတျမှုတှေ တိုးလာပါလိမ့ျမယျ…ပုံ့လဲ လကျနဲ့ဆန့ျသလောကျတော့ ကွယျငါးလေးတှကေောကျနဖွေဈပါတယျ
Previous post သူငယ်ချင်း၏ဇနီး အိပ်ပျော်နေစဉ် မမြင်အပ်သောနေရာအား ပါးစပ်ဖြင့်မဖွယ်မရာပြုလုပ်ခဲ့သူကို ဖမ်းဆီး
Next post လှိုင်Fever Clinic တာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီး Covid-19ကြောင့်ကွယ်လွန်